Filtrer les éléments par date : vendredi, 10 novembre 2017
vendredi, 10 novembre 2017 07:45
Fifidianana: Nandray anjara amin'ny famatsiam-bola ny Frantsay
Notanterahina ny alarobia 08 novambra tetsy amin’ny foiben’ny CENI ny sonia fifanarahana tamin’ny frantsay sy ny vaomiera mahaleon-tena momba ny fifidianana teo amba ny fiahiana’ny PNUD.
Nanolotra 300 000 Euro izay tafiditra ao antin’ilay tanjona Basket fund sy ny PACEM ny avy eo amin’ny fanjakana frantsay.
Raha ny lalàna misy amin’izao fotoana izao dia tsy anjara adidy ny CENI ny manondro ny datim-pifidianana, manamafy anefa ny Tompon'andraikitry ny CENI ny anondroana izany datim-pifidianana Filoham-pirenena mba ho filaminan’ny firenena satria lasa misy ady hevitra isan-tokony izay tsy tsara loatra ao anatin’ny fitanana izay fifidianana izay.
vendredi, 10 novembre 2017 07:43
Pesta: Misahotaka ny Ray amandrenin'ny mpianatra
Misahotaka ny Ray amandreny omaly alakamisy 09 novambra fa misy olona milaza ho dokotera mpanindrona mandeha 4X4 arahina EMMO ka nampisahotaka ireo mpianatra sy ny Ray aman-dreny manerana ny faritra Manarintsoa sy Andavamamba ary efa tonga eny Andoharanofotsy amin'izao fotoana izao.
Mitsoaka mirifatra mitondra ny zanany mandeha mody ireo Ray aman-dreny.
Vokany, manao fanambarana ireo tompon'ny sekoly tsy miankina fa dia mikatona ary tsy mianatra ny mpianatra manomboka rahampitso 10 novambra raha tsy milamina izao raharaha izao, ary milaza ireto farany fa dia tsy tompon'andraikitra amin'ireo zaza izay mbola alefa any ampianarana any ihany.